Maxay Tahay Sababta Beesha Skyway?
Skyway waa wadnaha iyo nafta Seattle-King County. Waxaan ku faraxsanahay kaladuwanaansho. Bulshadeenu way xoog badan tahay wayna sii kordheysaa inkasta oo la iska indho tiray oo laga indho tiray maalgashiga dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay tobanaan sano. Waxaan hoy u nahay dad dakhli kasta leh, waanan iska caabineynaa cadaadiska foosha xun iyo barakac. Waxaan halkan u joognaa inaan sii joogno. Anaga oo udub dhexaadinayna Nidaamka Cuntada ee cadaalada ee Skyway, waxaan maamuusnaa oo udub dhexaad u nahay codadka bulshada BIPOC ee la iska indhatiray muddo dheer.
Waxaan u isticmaalnaa magaca "Skyway" inaan ula jeedno xaafadda oo dhan mararka qaarkood loo yaqaan "Skyway - West Hill."
Skyway waxay ku taal guriga ugu weyn ee Afrikaanka-Ameerikaanka ah ee ku yaal gobolka Washington, iyo Nidaamka Cuntada Magaalooyinka ee 'Pact' wuxuu u dabaaldegaa oo xarumo u noqdaa hoggaanka Madow ee dib-u-maleynta Nidaamkeenna Cuntada Magaalooyinka.
Daaro fiidiyowgan si aad waxbadan uga maqasho cidda aan nahay iyo waxa aan u qabanno Skyway Community.
Heshiisyada Nidaamka Cuntada Magaalooyinka (UFSP) waa Madoow-iyo haween ay hogaaminayaan xubnaha Bulshada, Hogaamiyaasha Iimaanka Ku saleysan, Beeraleyda Madow iyo Madow, Ururada Ku saleysan Bulshada iyo Degmada Dugsiga Renton oo ay martigeliso Skyway Envision Center.
Himiladayada Wadajirka ah ee Wadajirka ah
Waxaan bilaabaynaa qaab saamayn wadareed ah oo aan ku hagno shaqadeena. Xubnaha UFSP Partnership waxay si wada jir ah uga shaqeynayaan inay aqoonsadaan oo ay ballanqaadaan Ajandaha Guud, Qiyaasta la Wadaago, Waxqabadyada Xoojinta Wadajirka ah, iyo Wada Xiriirka Joogtada ah. Kooxda xudunta u ah Nidaamyada Cuntada Magaalooyinka Kooxda heshiisku waxay u adeegaan sidii "Ururka Laf-dhabarta" tusaalaheena Saameynta Wadajirka ah.
Waxaan ka shaqeyneynaa iskaashi si aan uga dhisno nidaam cunno maxalli ah caddaalad iyo sinnaan bulshada Skyway. Shaqadeenu waxay ujeedkeedu tahay in la baabi'iyo sinaan la'aanta iyo midabtakoorka qaabdhismeedka ah ee ka jira nidaamka cuntada ee ballaaran laga soo bilaabo beerta ilaa miiska cuntada.
Waxaan higsaneynaa oo aan abuureynaa xiriiro cusub oo kusaabsan cuntada iyo beeraha oo leh cadaalada xarunta. Nidaamka cuntada ee hadda ka jira Skyway wuxuu dadka deegaanka u diidayaa inay helaan cunnooyin caafimaad qaba iyo shaqooyin macno leh, mushahar fiicanna ka hela qaybta cuntada iyo beeraha. Waxaan soosaaraynaa Qorshe Hawleed Beesha Caddaaladda Cuntada. Qorshahani wuxuu aasaas u noqon doonaa Nidaamka Cuntada Magaalada oo cusub oo taageera caafimaadka jirka, shucuurta iyo ruuxiga ah, fursadda dhaqaale, iyo hal-abuurka dhammaan dadka deggan Skyway.
Iyadoo ujeedooyinkaas maskaxda lagu hayo, howlaheena hadda socda iyo kuwa soo socda waxaa ka mid ah:
Waxbarashada Caddaaladda Cuntada, Aqoon isweydaarsiyo & Qorshaynta Waxqabadka
U doodista Caddaaladda Cuntada
Wadooyinka Shaqada ee Barnaamijyada Beeraha Magaalooyinka
Goobaha Nabadda (Barnaamijyada Beerista Beeraha)
Ballanqaadka (Mabaadi'deena Hagaya)
Kuwani waa mabaadi'deenna "qabyada ah" ee hagidda, oo ku saleysan fikradda bulshada ee bilowga ah Waxaan sii wadaynaa inaan ku sifeyno kuwaan talooyin dheeri ah oo ka yimid la-hawlgalayaasha UFSP.
Qof kasta ula dhaqan sharaf iyo xushmad
Ku kalsoonaanta, ballanqaadka joogtada ah ee Skyway
Xarunta Codadka madow iyo hoggaanka
Koriye ka tirsan bulshada kala duwan ee Skyway
Taageerida iyo kala hormarinta bulshada-hogaaminta iyo ururada ku saleysan bulshada
Qaado qaab dhammaystiran caafimaadka iyo fayoobaanta
La kulan Kooxda UFSP Core
Degmada Dugsiga Renton
( Isuduwaha Kaqeybgalka Qoyska iyo Bulshada, Degmada Dugsiga Renton ) wuxuu leeyahay in ka badan soddon sano oo waayo-aragnimo ah oo lagu taageerayo dhalinyarada iyo qoysaska, xagga caafimaadka dabeecadda, adeegyada bulshada iyo aadanaha, iyo arrimaha ka-qaybgalka qoyska iyo bulshada. Waxay ku fiicantahay dhisida iskaashi dhexmara dawlada, macaashka iyo hay'adaha aan macaash doonka ahayn, taas oo ay hogaamineyso qadarin qoto dheer oo ku saabsan sida iskaashiga wax ku oolka ahi u horumarin karo tayada nolosha dadka ugu nugul intayada dhexdeena ah. Cherryl waa Arday ka qalin jabisay Jaamacadda Tulsa oo haysata BA ee cilmu-nafsiga iyo cilmiga bulshada iyo sidoo kale Kuliyadda cusub ee Kaliforniya halkaas oo ay MA ku leedahay la-talinta cilmu-nafsiga.
Sarah Lindsley, Ph.D. ( Maamulaha Mashruuca, The Urban Food Systems Pact ), waa milkiilaha iyo agaasimaha guud ee shirkada Sarah Lindsley Consulting, oo ah shirkad latalinaysa horumarinta bulshada. Shaqadeeda waxaa lagu wargaliyay in kabadan labaatan sano oo khibrad ah oo ku saabsan abaabulka bulshada, u doodista siyaasadeed ee horumarsan, tacliinta, iyo u adeegida dowlada. Sarah sidoo kale waxay u shaqeysay sidii gacan-qabad khudaar dabiici ah iyo beero adhi ah shaqadeedii hore; ka mid noqoshada UFSP dib-ugu-xirnaanta rabitaankeeda qotada dheer ee caddaaladda cuntada iyo beeraha waara.
Xarunta dhalashada cusub ee ka mid noqoshada bulshada
Kimberly Sopher-Dunn waa Agaasimaha Dhismaha Awoodda Waxbarashada iyo Bulshada ee leh Xarunta Dhalashada Cusub ee ka mid noqoshada bulshada, wadaadka wadaadka ee Wasaaradaha Dhalashada Cusub (iyada iyo ninkeeda, Wadaadka Scipio Dunn), iyo aasaasaha Tuulooyinka Petah, oo dhowaan la aasaasay Dugsiga barbaarinta dibadda ee Skyway. Iyadu waa daaci caddaaladda bulshada, heesaa / heesaa, baraha bulshada ku salaysan iyo qoraa, oo leh Doctorate in Education in Transformative Education oo ka socota Jaamacadda Simon Fraser. Hadafkeedu waa in ay xaqiijiso nidaam deegaan oo waara oo loogu talagay bulshada Skyway, rabitaankeeda qotada dheerna waa in la weyneeyo codadka kuwa ay saameeyeen maqnaanshaha nafaqada nafaqada leh iyo meelaha bey'ada u nabdoon.
La Tanya VH DuBois
Jamie Jackson (Agaasimaha Fulinta, Mashruuca Dare2Be) waa hoggaamiye adeege, oo aad u jecel arrimaha caddaaladda bulshada, iyada oo Caddaaladda Cuntadu ay tahay mid horudhac ah. Iyadu waa Alumni ka tirsan Jaamacadda Bariga Washington oo haysata BA ee Daraasadaha Isku-dhafan iyada oo xoogga la saarayo Sayniska Bulshada. Xubin ahaan UFSP Core Team, diiradeeda waxay saareysaa ka faa'iideysiga barnaamijyada shaqaale ee Mashruuca Dare2Be si loo dhiso wadiiqooyinka la xiriira ganacsiga beeraha ee Xubnaha Beesha Skyway.
Iskaashiga Aaga Hal-abuurka Renton
Kooxda UFSP Hoggaanka Bulshada
Dr. Oneita Jordan
Wada-hawlgalayaasha ku saleysan iimaanka
Ururada Bulshada Ku Salaysan
Hay'adaha & Iskaashatada Dowlada